Mayelana NATHI - I-Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Co, Ltd.
I-Hangzhou Genesis Biodetection neBiocontrol Co, Ltd. (GENESIS), Eyasungulwa ngonyaka we-2002, njengomkhiqizi wedivayisi yokuxilonga i-in-vitro, ibilokhu ikhethekile ocwaningweni, ekwakhiweni nasekwakhiweni kwamakhithi okuhlola okusheshayo, kanye namakhithi e-POCT nezinsimbi ezifanele. Ithimba le-R & D le-GENESIS liholwa ososayensi nabasosayensi baseChina ababuya e-United States nase-Japan, abanesizinda esiqinile nesipiliyoni emikhakheni eminingi ehlanganisa i-microbiology, i-immunology kanye ne-biology yamangqamuzana.
Le nkampani isungule uchungechunge lwamadivayisi wokuhlola asheshayo namakhithi we-POCT wokuthola ngokushesha amagciwane ezithweni zokuphefumula kanye nokutheleleka ngesisu, kufaka phakathi i-Influenza A, B, Respiratory Adeno Virus, Respiratory Syncytial Virus, Mycoplasma Pneumoniae, Norovirus, Rotavirus, njll. Imikhiqizo eminingi kungaba yiyo kuphela noma ingeyokuqala ekilasini eChina. Ngakho-ke, uGenesise ubengumholi wemakethe esivivinyweni esisheshayo se-pathogen yokuphefumula kanye ne-digestive tract pathogen iminyaka eChina.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokusebenza okuphezulu nekhwalithi yemikhiqizo kaGENESIS, imikhiqizo nayo ibonwe kahle emakethe yaphesheya kwezilwandle kubandakanya iJapan, iYurophu kanye namazwe ase-Asia.
Isibhedlela Esihlangene SaseZhejiang University
I-Ph.D Biochemistry evela eKyoto University, eJapan
◼ I-P & G R&D yeminyaka eyi-10 yokunakekelwa kwezempilo nezigaba zokunakekelwa kwesikhumba
> Amaphepha okucwaninga asekuqaleni angama-100
> Abangu-30 kumajenali aphakeme abekwe emhlabeni wonke ane-Impact Factor> 3
Siyabonga ngokuvakashela iwebhusayithi ye-GENESIS!
Njengomkhiqizi oholayo wemboni ye-IVD, i-GENESIS izinikele futhi ikhethekile ku-R & D, ukukhiqiza, ukuthengisa nokumaketha ama-reagents wokuxilonga asheshayo wezokwelapha namakhithi wokuhlola, ama-reagents e-microbiology neminye imikhiqizo efanele, kanye nensizakalo ehlukahlukene njenge-OEM, i-ODM, i-Technology Transfer kanye ukusebenzisana njll kumakhasimende ethu. Ukusebenza nenkampani yethu yokubumba ephethwe kanye nepulasitiki, i-GENESIS iyakwazi ukwenza imiklamo ye-OEM ne-ODM yemikhiqizo elahlwayo epulasitiki futhi iphathe ukukhiqizwa kwevolumu ngesicelo sekhasimende.
I-GENESIS isungule uchungechunge lwemikhiqizo yokuxilonga i-in-vitro esuselwa ekutholakaleni kwe-antigen kwe-pathogen okubandakanya i-M. pneumoniae, i-Influenza A / B, i-Adenovirus (yomabili yokuphefumula kanye ne-gastro), i-Respiratory Syncytial Virus, igciwane le-Noro, i-Rota Virus, i-H. pyroli , Isifo sofuba, iStrptococcus A, noDengue njll. I-Mycobacterium Tuberculosis Kit kit (ukuthola uketshezi lwe-MBP64) kanye ne-Mycoplasma Pneumoinaze Antigen Test Kit yizona “zodwa”. imikhiqizo etholakalayo eChina.
Ekuqaleni kwesifo esiwumshayabhuqe se-COVID-19, uGenesise wayengomunye wezinkampani ezimbalwa ezazisungule ngokushesha amakhithi okuxilonga leli gciwane. Manje, uGenesise unochungechunge lwemikhiqizo embozwe yi-COVID-19 kusuka kusetshenziswa iqoqo lesampula (i-VTM, abaqoqi bamathe, ama-swabs), ama-antibody test kits (amasosha omzimba aphikisana ne-S protein no-N protein) kanye namakhithi wokuhlola i-antigen
Izakhiwo zethu zokwakha zakhiwe futhi zakhiwa ngokulandela imihlahlandlela ye-Japan Health Warefare & Labor Ministry, i-China Good Manufacturing Practice (GMP) kanye ne-US Food & Drug Administration (FDA), ukuze kuqinisekiswe umkhiqizo wekhwalithi engcono nokuzinza. I-GENESIS isungule umugqa wokwenza i-aseptic ngaphansi kwendawo elawulwayo yokushisa kanye nomswakama ngokusetshenziswa kobuchwepheshe kwemishini yokukhiqiza ezenzakalelayo.
Ngenkolelo yokuthi "ukuhlinzeka amakhasimende ngesisombululo esisheshayo, esinemba kakhulu, esilula nesiphelele", i-GENESIS iphinde yathuthukisa uchungechunge lwezinto zokuhlola zamangqamuzana nezokuzivikela komzimba kanye nemidiya elungiswe ngaphambilini elungiselelwe i-microbiology neminye imikhiqizo ezindaweni ezifanele.
"Ukuthembeka nokuthembakala, ikhwalithi ephezulu nokusebenza kahle, ikhasimende ligxile", yinani lethu eliyinhloko. Sikholwa ukuthi uGENESISI uzoba nekusasa eliqhakazile nempumelelo. Sizoqhubeka siphikelele, sizinikele futhi singalokothi siyeke izinkolelo zethu lapho sibhekene nobunzima ukuze sifeze inhloso yethu efanayo.
Ngibonga bonke abangane ngokusixhasa kwakho.
NgoNovemba 2017, iqembu lekholomu le-CCTV5 "Chess and Cards Music" elinesihloko esithi "Chess emhlabeni, chess engapheli" lafika eZhejiang "Idolobha lakubo likaYu Shun" -Shangyu, Shaoxing. Ifa lamasiko likaShangyu lichumile, futhi linobudlelwano obujulile bomlando noGo kusukela ezikhathini zasendulo. Ngesikhathi sosaziwayo wase-Eastern Jin Dynasty uXie An wayehlala eShangyu Dongshan, waba nezingxoxo nosaziwayo abaningi futhi wadlulisa njengendaba enhle.
Sekuyiminyaka eminingi uShaoxing Shangyu ezinikele ekwandiseni nasekukhuthazeni iGo yezingane, futhi wathatha ithuba lokufaka isicelo ngempumelelo se "Hometown of Go" ukuze aqhubeke kangcono nesiko lendabuko. Umphathi wethu jikelele u-Chen Gongxiang wamukele ingxoxo ne-CCTV. Njengomongameli weShangyu District Go Association, usize i- "Go Public Welfare" iminyaka eminingi. Ngemizamo engapheli nokuqina, imiqhudelwano emikhulu kazwelonke yeGo Go ibanjelwe eShangyu ngempumelelo. Kukhuthaze ukuthuthukiswa komdlalo weShangyu Go, futhi kwengeza amandla okuzuza ifa lesiko lamaShayina, ukukhuthaza isitayela esisha sezikhathi, nokukhuthaza imfundo esezingeni.